Amazon Kindle miaraka amin'ny hazavana natsangana dia toa tsy afaka nanatsara ny Kindle [ANALYSIS] | Vaovao momba ny gadget
Rehefa tsara loatra ny vokatra iray, na eo aza ny fahatsorana be loatra dia mitohy mandritra ny taona maro, mihevitra ny olona fa ny zavatra mety indrindra angamba dia ny mampihatra ny faratampon'ny: Raha mandeha io dia aza kitihina. Saingy orinasa mampidi-doza i Amazon ary tsy tiany ny mibanjina.
Ny orinasan'i Jeff Bezos dia nanavao ny Amazon Kindle fototra hanampiana hazavana miharo, manatsara ny vokatra iray izay toa lavorary amin'ny toetrany. Eo am-pelatanantsika ary sambany ny Amazon Kindle miaraka amin'ny hazavana mitambatra, mijanona miaraka aminay ary jereo hoe ahoana izany amin'ny fanadihadihana antsipirihany.
Amazon dia manana eo afovoany amin'ireo vokatra misy Kindle "mora vidy", izany no maodely fototra indrindra izay mbola betsaka noho ny ampy sy betsaka ho an'ny olona mety maty, ka izany no anisany iray amin'ireo lafo indrindra amin'ny orinasa amerikana avaratra, ary tsy manome tsiny azy ireo izahay. Izahay dia mitondra anao ny Kindle miaraka amin'ny hazavana voarindra izay natomboka tamin'ity 10 aprily ity mba hahitanao amin'ny an-tsipiriany tsara raha toa ka azo antoka ny fampiasam-bola, na dia efa afaka milaza aminao aza izahay fa namela tsiro tena tsara teo am-bavanay, jereo io jerena Tsy misy vokatra. manomboka amin'ny 89,99 € na dia atolotray anao ho mailo hatrany amin'ny tolotra ho avy.
1 Volavola sy fitaovana: Ny tsara raha tsotra, tsara indroa
2 Toetra ara-teknika: Be loatra noho ny famakiana tsy misy fetra
3 Jiro eo aloha sy ny interface an'ny mpampiasa
Volavola sy fitaovana: Ny tsara raha tsotra, tsara indroa
Mahita fitaovana vita amin'ny polycarbonate, plastika mandritra ny androm-piainana isika, izany dia manome fanoherana sy maivana izay tsy hitantsika amin'ny fitaovana hafa mitovy amin'izany, na dia ho an'ny mpampiasa sasany aza dia “premium kely” io fahatsapana io. Tsy tokony hohadinointsika fa ny boky ananantsika dia boky elektronika. Manana lanja amin'ny 174 grama fotsiny ho an'ny tontonana enina santimetatra sy refy marina 160 x 113 x 8,7 milimetatra, Manify izy io, miaraka amin'ny lafiny efijery tsara ary mifanaraka tsara amin'ny tanany, azontsika atao ny mamaky amin'ny iray amin'izy ireo fotsiny.
lanja: Gramin'ny 174
Dimensions: X X 160 113 8,7 MG
Navoaka tamin'ny loko roa izy io: Mainty sy fotsy. Na aiza na aiza no ahitantsika bokotra, satria eo amin'ny farany ambany ihany no misy azy, eo akaikin'ny mpampitohy microUSB (maninona raha USB-C amin'ny 2019 feno?) Hampiasaina handoavana azy io. Ity bokotra ity dia ho rafitra fanidiana hametraka ny efijery amin'ny efijery, ary koa hamono azy tanteraka, fa ny sisa tsy maintsy hivezivezena amin'ny alàlan'ny fikitika ny efijery. Ny zana-kazo kely asongadiny kely dia ampy hametrahana ny rantsan-tànana ary tsy hanelingelina ny velaran'ny famakiana, ankasitrahana indrindra izany.
Toetra ara-teknika: Be loatra noho ny famakiana tsy misy fetra
Araka ny efa nolazainay, manana efijery iray izahay ranomainty elektronika enina santimetatra, Io dia hahafahantsika tsy hijaly reflexes ara-bakiteny amin'ny toe-javatra rehetra, dia mitovy amin'ny famakiana boky nentim-paharazana izany. Na dia mampiasa ny anao aza izahay Jiro 4 an'ny jiro eo aloha isika dia afaka mankafy an'ity teknolojia ity izay hitazona ny masontsika ho salama ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy hahasasatra antsika raha mandany ny ora laninay eo alohany isika, tena fifaliana.
Display: 6 santimetatra misy valiny 167 DPI
Jiro 4-LED azo ovaina
fitehirizana: 4 GB
NAOTY: Amin'ny teôria dia manana Bluetooth izy ary voalaza ao amin'ny lisitry ny mpampiasa izany, saingy toa tsy mbola navitrika tany Espana izy io.
Ny valin'ny efijery dia 167 teboka isaky ny santimetatra, dia holazainay fa tsy ampy na saika mampalahelo izany raha tsy raisinay ho boky elektronika izy io, izay ampy na mihoatra noho ny ampy. Ny fahafaha-mitahiry dia 4 GB izay tsy azo velarana amin'ny karatra microSD na karazana tahiry ivelany. Ny fametrahana anaty boky vitsivitsy dia tsapantsika fa hanana tahiry 3 GB eo ho eo izahay raha esorinay tsy ho tsaroana ilay Rafitra miasa. Angamba teboka iray tokony hojerena raha mitahiry boky maro isika, zavatra toa tsy ilaina loatra raha jerena fa noho ny fifandraisana WiFi azy dia ho hitantsika ao amin'ny tranombokin'i Amazon foana izy ireo.
Jiro eo aloha sy ny interface an'ny mpampiasa
Hain'ny Amazon ny fomba handresena antsika amin'ny Operating System, ohatra iray dia ny faritry ny Fire TV. Manana interface mora azo ampiasaina izahay, manana intuitive, ny tara eo anelanelan'ny fiantsoana hetsika sy ny faharetan'ny fisehoana eo amin'ny efijery dia tena miharihary, fa mahazatra amin'ny ranomainty elektronika izany. Afaka miditra haingana amin'ny tranomboky isika, fifandraisana WiFi azo antoka ary afaka mividy boky mivantana amin'ny alàlan'ny Amazon, noho izany dia tsy maintsy ampiarahintsika ihany izy io araka ny aseho amin'ilay horonantsary miaraka amin'ity famakafakana ity.
Azontsika atao ny manisy tsipika ny lahatsoratra, mitady ny teny sy ny famaritana, mandika ny sasany izay tsy fantatsika amin'ny fiteny hafa ary manitsy ny haben'ny lahatsoratra aza, noho izany dia mila miantso ny karazana foibe fanaraha-maso fotsiny isika, izany hoe isika dia tsy handao ny pejy novakianay, na izany aza, ny rafitry ny tsoratadidy mandeha ho azy dia hampahatsiahy antsika ny pejy nisy antsika nefa tsy nisy fahasarotana be loatra. Ny jiro eo aloha dia azo ovaina amin'ny famirapiratany, amin'ny fomba mazava sy mazava tsara, izay midika fa afaka mamaky amin'ny alina eo am-pandriana na amin'ny tontolo maizimaizina toy ny fiaramanidina sy fiarandalamby isika nefa tsy mila fanelingelenana izay manana jiro ivelany, fa mahafinaritra fotsiny izany. Ary koa, ny fampiasana an'io hazavana io dia tsy manelingelina ny maso mihitsy raha ny fitsapana nataoko.
Ary koa, ahoana no fomba hafa, Amazon dia manolotra fonosana sy kojakoja be dia be ho an'ny Amazon Kindle mivantana ato amin'ity rohy ity.
Mampanantena antsika i Amazon momba ny 4 herinandro, maka ho fahazarana mamaky antsasak'adiny isan'andro miaraka amin'ny fifandraisana tsy misy tariby ary tapaka ny hazavan'ny jiro haavo 13. Amin'ny fampiasana mahazatra misy ny fifandraisana WiFi nohafanaina, famakiana antsasakadiny mihoatra ny adiny iray sy ny famirapiratan'ny herinaratra farany ambony vitantsika nahavita naharitra roa herinandro ny fampiasana iray miaraka amina fiampangana tokana, noho izany, ny fizakantena (voampanga feno ao anatin'ny adiny telo eo ho eo miaraka amin'ny charger 5V 2A) dia ampy hamakiana nefa tsy lasa olana. Ary koa, raha lavitra ny trano isika ary te hanitatra azy dia afaka mampihena ny famirapiratany fotsiny isika ary manala ny WiFi hampiato ny tatatra.
Mahazo aina, maivana ary mahatohitra izy io
Tonga lafatra ny jiro ary tsy mankaleo ny masonao
Matetika i Amazon dia mandefa tolotra mampihena ny vidiny
Ny rafitra miasa dia tsara vakiana tsy misy fetra
Mampiasà tariby microUSB fa tsy USB-C amin'ny 2019
Mila mifankazatra amin'ny fampifanarahana mpampiasa ianao
Toa fanavaozana lafo vidy ho an'ny Amazon Kindle izany, izay nandinika ny vidiny ary tsy nohavaozina nanomboka ny taona 2016 Tsy manan-tsafidy aho afa-tsy ny manoro izany Tsy misy vokatra. mialoha ny kinova nentin-drazana tsy misy hazavana izay manodidina ny folo euro latsaka. Ho fanampin'izany, Amazon dia hiafara amin'ny famoahana tolotra izay mahatonga ity fitaovana ity ho mahomby indrindra tato anatin'ny andro vitsivitsy, ka miarova.
Amazon Kindle miaraka amin'ny hazavana natsangana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » hevitra » Amazon Kindle miaraka amin'ny hazavana mitambatra, toa tsy afaka nanatsara ny Kindle [ANALYSIS]
dr.fone: ny fitaovana hamindra sy hamerenana amin'ny laoniny WhatsApp amin'ny iOS sy Android